'टोखा नगरबासीको पिसिआर परिक्षण निशुल्क गरिदिएका छौं' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ भाद्र ३० गते १०:०८
रनलाल कुलाल स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, टोखा नगरपालिका
टोखा नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
टोखा नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य अवस्था पहिलाको भन्दा फरक छ । कोभिडको कारणले नियमित रुपमा हुने स्वास्थ्य खोप हरु रोकिएको छ । अन्य सेवा हरु निरन्तर रुपमा सञ्चाल्नमा छ्न ।
यो नगरपालिका भित्र कति सङ्ख्यामा कोरोना परिक्षण गर्नु भयो आज सम्म कुनै डाटा छ ?
डाटा छ किन न हुनु हिजो को डाटा बाहेक हामीले पिसिआर मात्रै तिन हजार जनाको गरि सकेका छौ ।
कोरोनाको जाँच गरेका मध्ये कति जनाको पोजेटिभ छ, कति जनाको नेगेटिभ छ ?
हामिले जम्मा तिन हजार जनामा टेस्ट गरेको मध्य चार सय उन्नतिस जानामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ।
पोजेटिभ रिपोर्ट आएका मानिसहरु लाई कहाँ र कसरि राख्नु भएको छ ?
टोखा नगरपालिकाले आफै आइसोलेसन निर्माण गरेको छ । टोखा चण्डेशोरिमा ३८बेड को आइसोलेसन छ । अब हामीले यसको क्षमतालाई बढाउने तयारी गरिरहेको छौ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै हामीले आइसोलेसनको निर्माण गर्छौ होमक्वारेन्टाइन बस्ने वातावरण नहुँदा हामीले तोकिएको ठाँउमा राख्ने गरेका छौ ।
आइसोलेसन निर्माण अझै बढाउने पर्ने हैन र ? जाँच गर्दै जादा सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिदै जान छ नि ?
यो विषयमा हाम्रो नगर प्रमुख पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । अब हामीले अन्य ठाउँ पनि हर्दै छौं । उपुक्त ठाउँ भेटिने बितिकै हामी आइसोलेसन निर्माण गर्छां ।
टोखा नगरपालिका भित्र पोजेटिभ देखिएका बिरामिहरु लाई कुन अस्पताल पठाउने गर्नु भएको छ ? कि नगरपालिका भित्रै छ अस्पताल ?
अहिले यसो छ हामिले आइसोलेसनमा राख्ने भनेको लक्षण देखिएकाहरु लाई मात्रै हो । गम्भीर बिरामि परेकाहरु लाई राज्यले तोकेको अस्पतालमा नै पठाउने गरेका छौं ।
कोरोना चेक गर्दा स्थानीयहरु लाई निशुल्क छ, कि शुल्क तिर्नु पर्छ ?
अहिले सम्म नगरपालिकाले जे जति सुरक्षाको उपायाहरु लगायत जति टेस्ट गरेको छ । सबै नगरपालिका बेहोरेको छ । एक पैशाँ पनि जनताको खर्च भएको छैन । सबै नगरपालिकाको खर्चमा भएको छ।
टोखा नगरभित्र यदि कसैको स्वास्थमा कुनै समस्या आएमा कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
स्वास्थमा समस्या आएमा तत्काल हामी लाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्द्छु। हामीलाई सम्पर्क गरेपछि स्वास्थ अवस्था चेक गरि अस्पताल पठाउनु पर्ने हो कि यहिं सामान्य उपचारले हुन्छ अबस्था हेरेर सहयोग गर्छौ ।
टोखा नगरपालिकामा पनि कोरोना पोजेटिभ बढ्दै गएको देखिएको छ, स्थिति झन खतरा हुन सक्छ यस विषयमा कति को जानकार हुनुहुन्छ ?
अहिले हामिले प्रत्येक वडामा परिक्षण गर्दै छौ । तपाईले भने जस्तै बढी बढी नै देखिदै छ । यसमा हामि गम्भीर भएर लागि रहेका छौं । जानकारी न राख्ने तयारि नै नगर्ने भन्ने त कुरै भएन।
यो नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरु लाई के भन्नुुहुन्छ ?
सबै भन्दा प्राथमिकता को विषयमा कोभिडलाई कसरि नियन्त्रण गर्ने भने छ । यसमा जनताले साथ दिनु पर्यो । स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न लाई अनुरोध गर्दछु। कोरोना पोजेटिभ आएको मानिसलाई पनि सम्मानजनक ब्याबाहार गर्न अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा म के भन्छु भने कोभिडबाट कसरि बच्ने भने कुरा सबै लाई थाहा भैसकेको छ । यस विषममा म धेरै बोल्दिन अब कोरोना नेपालमा बढ्दै छ । हामी एकदम सजक हुनु पर्छ।